Article – King Of Future
ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရလဲ ❓
1 Comment	/ Article / By codexmyanmar
☘️ ငကွေေးဖောငျးပှမှုအကွောငျးပွောရရငျ ကြှနျတောျတိုငယျဘဝတုနျးကအခြိနျတှနေဲ့ ဆကျစပျမှုရှိနပေါတယျ။ အထူးသဖွင့ျ90 Bornတှဆေို ပိုသိပါလိမ့ျမယျ။ ကြှနျတောျတို ငယျငယျတုနျးက ကြှနျတောျတို မိဘတှေ ဘိုးဘှားတှကေ သူတိုခတျေက တဈကပြျတို တဈဆယျတိုဆိုတာ ဘယျလိုသုံးလိုရတယျ ဘာဝယျလိုရတယျဆိုတာ နားထောငျရငျး ကွီးပွငျးလာခဲ့ကွပါတယျ။ဒီလိုဖွဈရခွငျး အကွောငျးအရငျးဟာ ငှကွေေးဖောငျးပှမှု (inflation) ကွောင့ျပဲ ဖွဈပါတယျ။ 🍀 (Inflation) ငှကွေေးဖောငျးပှမှု (သို) ငှကွေေးတနျဖိုးကဆြငျးမှု ဟာ အခြိနျနဲ့ အမြှ ကုနျစညျ နဲ့ ဝနျဆောငျမှုတနျဖိုး အတကျအကကြို ဖောျပွတဲ့ economy terms တဈခုဖွဈပါတယျ။ နိုငျငံတဈနိုငျငံမှာ ငှကွေေးဖောငျးပှမှု ကို ဘယျလိုအခကြျတှကေ ဖွဈစတောလဲဆိုတာကတော့… 1️⃣ ငကွေေးတနျဖိုးကဆြငျးမှု 🍀 နငျငံတဈနိုငျငံရဲ့ ငှကွေေးဖောငျးပှမှုဟာ စီးပှားရေးအရ ငှကွေေးဝယျလိုအားကဆြငျးမှုကွောင့ျဖွဈပါတယျ။ သမိုငျးတဈလြှောကျပွနျကွည့ျမယျဆို အရငျက coffeeတဈခှကျကို …
ငွေကြေးဖောင်းပွမှု ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရလဲ ❓ Read More »
The Difference between Pro Traders and Normal traders
60 Comments	/ Article / By codexmyanmar
ပညာရှင်ကျကျ Trade သူများနဲ့ demo နဲ့ သာမန် Trade သူများ ကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း PRO ကျကျ trade ဖို့ဆိုတာ အခုမှ အမြတ်ရအောင်ကြိုးစားကြိုးစားနေကြသူများအတွက်ခက်ခဲတဲ့ အရာကြီးဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီနေမှာတော့ သာမန်နဲ့ pro trader အကြားကွာခြားချက်ကို ပြောပြချင်ပါတယ် ။ ဒါကိုဖတ်ပြီး ခုမှစလုပ်တဲ့ trader များအတွက် အတွေးသစ်တွေ ဆုံးဖြတ်ချက်များ သေချာချနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ Forex တွင်ပညာရှင်ကျကျ trade လုပ်သူများ -ထိရောက်သော ကုန်သွယ်နည်းစနစ်ရှိခြင်း -forex trading strategies များသုံးခြင်း -signal များအသုံးပြုျ မှုမရှိခြင်း -စနစ်တကျ စွန့်စားရောင်းဝယ်ခြင်း -trading မလုပ်မှီစိတ်လှုပ်ရှားမှုမရှိခြင်း -profit အားအချိန်မှီရယူနိုင်ခြင်း -ကိုယ့်အကျိုးထိခိုက်သည်အထိ အရှုံးမခံခြင်း -over trading …
The Difference between Pro Traders and Normal traders Read More »
REPO Rate နှင့်ပတ်သတ်တဲ့အမြင်လေးပါ။
59 Comments	/ Article / By codexmyanmar
FED က ဘာကြောင့်မို့ System ထဲကို Luquidity ကို တွန်းပို့ခဲ့တာပါလဲ။ ဒါဟာ ငွေကြေးတွေကို treasuries တွေအပါအဝင် ငွေစက္ကူထပ်မံရိုက်နှိပ်ဖို့အခြေအနေကို ဦးတည်နေစေမှာဖြစ်ပြီး ဘဏ်တွေဟာ ငွေကြေးတွေ မလိုအပ်ဘူးဆိုခဲ့ရင် တကယ် ငွေကြေးလိုအပ်နေတာက အမေရိကန်အစိုးရကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေခဲ့ရင်… နောက်ပြီး အစိုးရဘဏ္ဍာရေးနှစ်က ဒီ စက်တင်ဘာ ၃၀ မှာ ပြီးဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အခြေအနေတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် … အမေရိကန်အစိုးရက ကြွေးမြီတွေပိနေပြီး Fed က လာမယ့် အောက်တိုဘာ ၁ မှာ ဆပ်ရဖို့ရှိနိုင်တဲ့ ကြွေးမြီတွေကို ကူညီပေးဖို့ ကြိုးစားနေတာဆိုရင်ကော …။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အမေရိက အနေနဲ့ ကြွေးမြီတွေကျေနိုင်ဖို့ လုံးဝ သူတို့စီးပွားရေးတွေ ငွေတန်ဖိုးတွေတက်အောင်လုပ်မှာဖြစ်ပြီး တကယ်လို့သာ ဒါတွေဟာမှန်ကန်ခဲ့ရင်တော့ ဒီအကြောင်းတွေကြောင့် ဈေးကွက်ဟာ ဂယက်ထနိုင်ပြီး ရွှေဈေးဟာ …
REPO Rate နှင့်ပတ်သတ်တဲ့အမြင်လေးပါ။ Read More »
Take Profit and Stop Loss (26.10.2019)
147 Comments	/ Article / By codexmyanmar
Trader တို့အမေးများတဲ့spread နဲ့swap ရဲ့အသေးစိတ်အဓိပ္ပာယ်ကို မျျှဝေလိုက်ပါတယ်။ Spread ကတော့ရိုးရှင်းပါတယ်။ spread ဆိုတာက ဝယ်စျေးရောင်းစျေး ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာက ဝယ်စျေးရောင်းစျေး ခြားနားချက်ဖြစ်တယ် ။ Swap မှာတော့ပြောစရာကများသွားပါတယ် ။ Swap ဆိုတာကတော့ မတူညီတဲ့ currency တွေ ပစ္စည်းတွေ exchange လုပ်ရာတွင် အသုံးပြုတဲ့မူရင်းမဟုတ်တဲ့စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ အများစုသော swap များတွင် ဥပဒေများက အခြေခံထားသည့် ငွေကြေးလည်ပတ်မျုများပါဝင်သည်။ ထိုကဲ ့သော စာချုပ်များအတွက် ပေးဆောင်ရသော ငွေကြေး လည်ပတ်မှုများသည် အတိုးနှုန်းငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှုန်း(Or) တန်ဖိုးအညွန်းကိန်းပေါ်မူတည်သည် ။ အသုံးများသော swap မှာ …
Take Profit and Stop Loss (26.10.2019) Read More »
68 Comments	/ Article / By codexmyanmar
Spread and Swap Read More »
If you want to be successful, Be consistent (001)
6 Comments	/ Article / By codexmyanmar
Forex မှာ ငွေ စီးပွား စီးဆင်းရေး အတွက် အနှောက် ယှက်တွေ ရှင်းပါ (001) မင်္ဂလာနေ့လည်း ခင်မှာ Trader တွေအတွက် မှတ်သား ဖတ်ရူစရာ ဆောင်းပါး လေး တစ်ခု ရေးပေးလိုက်ပါတယ် သင်ဟာ ကြီးမားတဲ့ ကုန်သည်သူတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် နေ့စဉ်နေ့စဉ် Trade များများ လုပ်ခြင်းက သင်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ ရ လဒ်တွေကို ရတယ်လို့ သင်ထင်လိမ့်မယ်.. ကုန်သွယ်မှူဆိုတာ တစ်နေ့တာ အလုပ်တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး… ကုန် သွယ် မှူ ဆိုတာ စီး ပွား ရေး တစ် ခု ဖြစ် တယ်.. !! တစ် ပတ် မှာ Trade order တစ်ကြောင်း တည်း …
If you want to be successful, Be consistent (001) Read More »
If you want to be successful, Be consistent (002)
29 Comments	/ Article / By codexmyanmar
Forex မှာ ငွေ စီးပွား စီးဆင်းဖို့ အတွက် အနှောက်ယှက် ရှင်း (002) Trading မှာ အောင် မြင် ဖို့ အရေး ဖြတ် လမ်း ဆိုပြီး အသုံး ပြု ကြ တယ်… လူ အများ စု ကို အမြဲ မြင်တွေ့ ရတယ် /Trading လုပ် တဲ့ အခါ မှာ မိမိ ကိုယ့်ကို အသုံးပြု စဉ်းစားပြီး Trade တာ ထက် အခြား သော နောက် တစ် ယောက် သော သူ ကို အသုံးပြု တာပါ ပဲ… တစ်စုံ တစ်ယောက်က ဈေးကွက် …
If you want to be successful, Be consistent (002) Read More »